‘स्वास्थ्यमा हेलचेक्राई गर्छन् महिलाहरु’ – Rajmarg Online
‘स्वास्थ्यमा हेलचेक्राई गर्छन् महिलाहरु’
घोराही, २० जेठ । आइतवार सवारीकोटमा संचालन भएको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा आफ्नो पाठेघरको जाँच गर्न आएकी एक २२ बर्षिया महिलाको पाठेघरमा घाउँ देखियो । अर्की २० बर्षिया विवाहित महिलाले पनि सेतो पानी बग्ने समस्याबाट ग्रस्त भएको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई सुनाइन ।
यस्तै अर्कि १९ बर्षिया महिलाले पनि तल्लो पेट दुख्ने र यौन अंग चिलाउने समस्या लिएर आइन । आइतवार दिनभर चलेको शिविरमा उपचारका लागि आएका आधाबढी महिलाको पाठेघरमा समस्या देखियो । त्यस्तै परिवार नियोजनको आयोजनमा शनिवार घोराही ७ सौडियारमा उपचारमा आएका आधा महिलाहरुमा पनि प्रजनन अंगमा समस्या भएको थिए । महिला भएकै कारणले देखिने विशेष प्रजनन स्वास्थ्य समस्याबाट उनीहरु पीडित थिए ।
विवाह भएको उमेर देखि मृत्युपर्यन्त महिलाहरुमा पाठेघर वा यौन अंगमा विभिन्न किसिमका समस्या देखिएको पाइन्छ । विवाह हुनुपुर्व यौन अंग चिलाउने, तल्लो पेट धेरै दुख्ने जस्ता समस्यामा महिलाहरु परेका हुन्छन भने विवाह पश्चात तल्लो पटे दुख्ने, पाठेघरको मुखमा घाउँ देखिने, पाठेघर खस्ने, सेतोपानी बग्ने, पाठेघरको क्यान्सर हुने जस्ता समस्याहरु देखिन्छन् ।
विशेषगरी गाउँले परिवेशमा घाँस दाउदा, मेलापातमा जाने, गह्रौँ भारी बोक्ने, घरायसी काममा बढी खटिने, सरसफाईमा ध्यान नदिने महिलाहरुमा पाठेघरको समस्या देखिने स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउछन् । ज्ञान र सचेतनाको अभावमा सानो तिनो स्वास्थ्य समास्या देखिदा पनि वेवास्ता गर्दा महिलाहरुमा देखिने समस्या झन बल्झिने गरेको छ ।
डा. समिक्षा डिसीका अनुसार महिलाहरुमा विशेषगरी महिलाहरुमा सरसफाई र खानपानक पिसाबको समस्या, यौन अंग चिलाउने, सेतो पानी बग्ने समस्या देखिन्छ । त्यस्तै पाठेघर खस्ने, चिलाउने, पाठेघरको मुखमा घाउँ निस्कने हुन्छ । तर यस्ता समस्या देखिदा महिलाहरुले बजारमा जथाभावि औषधी किनेर खाने चेकजाँच नगर्ने हुदाँ महिलाहरुमा प्रजननसँग सम्बन्धित समस्या बढ्दै जान्छ ।
‘महिलाहरुले नुहाउदाको समयमा, पिसाव फेर्दाको समयमा पनि ख्याल नराख्दा पनि प्रजनन अंगमा समस्या देखिन्छ ।’उनी भन्छिन ‘चर्पिमा प्रयोग गरिने पानी फोहोर हुदाँ र दिसापिसाव सफा गर्नको लागि प्रयोग गरिने पानी दुगन्धित हुदाँ पनि महिलाहरुलाई समस्या हुन्छ ।’ डा. डिसीको भनाईमा महिलाहरुले विशेष गरी सरफाई र खानपानमा ध्यान दिनु नै उत्तम हुन्छ ।
परिवारनियोजन दाङ शाखामा कार्यरत बरिष्ठ स्टाफ नर्स सरीता तामाङका अनुसार पनि महिलाहरुले पटक पटक गर्भपतन गर्दा, सानो उमेरमा विवाह गर्दा पाठेघरमा समस्या देखिन्छ । यस्तै पौष्टिक खानेकुराको अभावले पनि महिलाहरुमा पाठेघर कमजोर हुने गर्छ ।
महिलाको यौन तथा प्रजनन सेवामा लामो समय देखि काम गर्दै आएको परिवार नियोजनले हप्तै पिच्छे विभिन्न व्यक्ति, संघसस्था, सरकारी निकायको सहयोगमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरु संचालन गरिरहेको हुन्छ ।
सघंका प्रबन्धक बसन्त खनाल दुरदराजमा रहेका व्यक्तिहरु, बजारमा पहँुचमा पुग्न नसकेकाहरुलाई सेवा दिने उद्देश्यले आफुहरुले शिविर संचालन गरेको बताउछन ।